थाहा खबर: राजनीतिक प्रक्रियामा हात हाल्ने नहाल्ने अदालतले सोच्ने कुरा हो : विष्णु रिमाल
राजनीतिक प्रक्रियामा हात हाल्ने नहाल्ने अदालतले सोच्ने कुरा हो : विष्णु रिमाल
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १४ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सोमबार नै सरकारले पूर्णता पाउँछ भनिएको थियो र त्यहीअनुसार गृहकार्य गरिएको थियो। तर अन्तिममा चार जना मात्र मन्त्रीलाई सरकारमा पठाइयो।
हालसम्म सरकारले पूर्णता पाउन नसक्नुको कारण के हो? यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग रेडियो थाहासञ्चारका लागि बोमलाल गिरिले गरेको कुराकानी।
फागुन ३ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई पार्टीबीच केही सल्लाह मिलेको थिएन। दोस्रो विषय हामीले मन्त्री मण्डल बनाउँदा नै मन्त्रालयको आकारलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने भनेका थियौँ। त्यसले गर्दा एक साता लम्बिन गएको थियो।
हिजो पनि पूर्णता दिने भनेका थियौँ तर अन्य दलहरूसँग पनि सम्पर्क गरिरहेका छौँ। उहाँहरूले पनि सरकारमा आउने इच्छा व्यक्त गरेको थाहा भएका कारण केही ढिला भएको हो।
हामीले एउटा मनोविज्ञान पनि बनाउन खोजेका हौँ। हामीसँग केही सिट खाली छ, तपाईंहरू आउनुहोस् भन्नुको मनोविज्ञान र सँगै मिलेर आउनुस् राष्ट्र निर्माण गरौँ भन्नुको मनोविज्ञान फरक हुन्छ।
विशेषगरी फोरमसँग कुरा भइहेको छ। सरकारमा सामेल पनि नहुनुपर्ने कारण नभएको अवस्थामा एक\_दुई दिन कुर्दा फरक पर्दैन भनेर हामीले केही ढिला गरेको हो।
विगतमा सरकार कति दिन टिक्छ भन्ने टुंगो थिएन तर अब त पूरा टिक्छ। मध्यावधिक समयमा पनि त अवसर नपाएका साथीहरूलाई दिन सकिन्छ नि! त्यस कारण मारामारको स्थित भने होइन।
अदालतले गरेका कुरामा सहमत/असहमत हुने हाम्रो ठाउँमा छ। अदालतले कसरी गर्छ हेरौँ न त्यो त। निर्णय नै नगरी यसो गर्छु भन्नु राम्रो हुँदैन। जहाँसम्म अदालतको अल्पकालीन आदेशमा शपथ ग्रहण नगराउनु भनेको हो, गराइएकै छैन। मन्त्री नबनाउनु भनेको छैन।
अहिले जितेर आउने साथीहरू साह्रै कलिला हुनुहुन्न। धेरै पटक मन्त्री भइसक्नुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ। नयाँ साथीहरू पनि विभिन्न तहमा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएको छ। त्यस कारण मन्त्री नपाउँदा ठुस्किनुपर्ने र मन्त्री पाउँदा खुसी हुनुपर्ने स्थितिमा कोही पनि हुनुहुन्न। समय पाए थामथुम गरेर केही हुन्छ भन्ने दुवै अध्यक्षले सोच्नुभएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
पहिलाको जस्तो मन्त्रालय थप्ने छुट पनि तपाईंहरूसँग छैन। पटक पटक जितेर आएकाहरू, अनुभवीहरू छन्। समावेसिता अपनाउनुपर्नेछ। त्यो हिसाबले पनि कतिको दबाब भोगिरहनुभएको छ प्रधानमन्त्रीले?
योग्य साथीहरूबीचबाट योग्य छान्ने भन्ने विषय त गाह्रो नै हो। अहिले योग्य मात्र छानेर हुँदैन, नयाँलाई पनि सिकाउनु छ। केही प्राविधिक पक्षहरू पनि छन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा हामीले अर्थविद् साथीलाई अर्थमन्त्री बनाएका छाैँ। त्यो खालको प्रयोगमा अहिले जानुपर्ने स्थिति छ। कसलाई छान्नु भन्ने कुरामा दुविधा हुनु त स्वाभाविक नै हो। तर यसमा अल्झेर बस्ने स्थितिमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न।
सर्वोच्च अदालतले शपथ नगराउनु भनेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुभएको छ। कति टिकाउ होला?
अदालतले विवेक पुर्‍याउँछ कि पुर्‍याउँदैन? राजनीतिक प्रक्रियामा हात हाल्ने/नहाल्ने अदालतले सोच्ने कुरा हो। भोलिको दिनमा पनि नजिरको कुरा आउला। पहिला एउटा सरकारले सिफारिस गरेका राजदूत अर्को सरकारले संसदीय सनुवाइबाट हटाउँदा पनि यो अदालतको विषय होइन, राजनीतिक विषय हो भनेको हामीले देखेका छौँ। सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा कसरी हेर्छ भन्ने हामी हेर्दै छौँ।
अदालतले गरेका निर्णय कुन ढंगले हेरिन्छ भन्ने हामीले सोच्नै परेन। हामी नियम कानुन मान्छौँ नै। तर हाम्रा लागिचाहिँ हामीले उपयुक्त व्यक्ति छानेका छौँ।
बैठकमा सहभागी नभएकाले सबै कुरा त मलाई जानकारी छैन तर फोरम सरकारमा नजाने कारण छैन। पहिला सानासाना पार्टी मिलेर सरकार बनाउने गरिन्थ्यो। अहिले संयुक्त वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्‍यौँ। फोरमलगायत दलले पनि हाम्रो घोषणापत्रमा नभएका उहाँहरूको घोषणापत्रमा भएका कार्यक्रमलाई लागू गर्न पनि पहल गरिरहनुभएको हो।
राजपा र फोरमका माग उस्तै छन्। संविधान संशोधन भए सरकारमा जान्छौँ भनिरहेको अवस्थामा किन फोरमलाई मात्र काखी च्यापेजस्तो गर्नुभएको?